အစ္စလာမ်ကိုဓါးမိုး၍ ဖြန့်ချီခဲ့တာလား ~ Myanmarmuslim - Islamic Resource
ဓါးမိုးပြီး သာသနာ ဖြန့်ခဲ့တဲ့အတွက် အစ္စလာမ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး ဘာသာတ ရားလို့ ဘယ်လိုလုပ် ခေါ်ဆိုနိုင်မှာလဲ။
မွတ်စလင်မဟုတ်သူ တချို့ကြားမှာ ဘဝင်မကျစွာနဲ့ ပြောဆို ဝေဖန်လာကြတဲ့ သူအချို့က အဓမ္မနည်းကို အသုံးပြုပြီး အစ္စလာမ်ကို မဖြန့်ချီခဲ့ပါဘူးဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်ပြီး ဒီဘာသာကို ယုံကြည်သူ သန်းပေါင်း များစွာ ရှိရတာလဲဆိုတဲ့ စောဒက တင်လာကြပါတယ်။ ဓါးမိုးပြီး သာသနာ ပြုတာ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်းကို အောက်ပါ အချက်အလက်တွေက ရှင်းလင်းသွားစေမှာပါ။ အစ္စလာမ် အလျင်အမြန် ကြီးထွား ပြန့်ပွားလာရ တာကတော့ သစ္စာတရား၊ ဆင်ခြင်တုံတရားကျပြီး ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံမှုနဲ့ ယုတ္တိဗေဒဆိုတဲ့ ရှိရင်းစွဲ အင်အားကြောင့်သာ လက်ခံ ယုံကြည်သူများ လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
။ အစ္စလာမ်သည် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုလိုသည်
အစ္စလာမ်က ဆလာမ် ဆိုတဲ့ ရင်းမြစ်ဝေါဟာရက လာပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေး လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ မိမိရဲ့အလိုကို အလ္လာဟ့်ထံမှာ လုံးဝ ယုံပုံ အပ်နှံ ကျိုးနွံခြင်းလို့လဲ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစ္စလာမ်က ငြိမ်းချမ်းရေးဘာသာတရား ဖြစ်တယ်။ ဒီအတွက် အချုပ်အချာဖြစ်တဲ့ ဖန်ဆင်းရှင် အလ္လာဟ်ရဲ့ အလိုတော်အတိုင်း မိမိရဲ့အလိုကို ကျိုးနွံပုံအပ်ခြင်း သွားဖို့ လိုပါတယ်။
။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အင်အား သုံးရပါသည်
ဒီကမ္ဘာမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းက ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ စိတ်သဘောထား ညီညွတ်မှုကို တည်စေလိုကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ကျိုး စီးပွားသက်သက်ကို ကြည့်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ပြုနေတဲ့ သူတွေ အများကြီးပါပဲ။ တစ်ခါတရံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် အင်အားကို သုံးကြရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းခံနဲ့ ကွက်တိဖြစ်အောင်လို့ နိုင်ငံတွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် ရာဇဝတ်ကောင်များနဲ့ လူမှုဝန်းကျင်ကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ပြုနေကြမှုကို ဆန့်ကျင်နှိမ်နင်းဖို့အတွက် ဆိုပြီး ရဲတွေကို ဖွဲ့စည်းထားကြရတာပါ။ အစ္စလာမ်က ငြိမ်းချမ်းရေးကို အားပေးတယ်။ တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အစ္စလာမ်က ယင်းရဲ့ အယူဝင်တွေကို ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်း မတရားပြုမှုတွေ ကြီးစိုးလာ နေရင်တော့ တိုက်ပွဲဝင်တွန်းလှန်သွားဖို့လဲပဲ နှိုးဆော် တိုက်တွန်းထား ပါတယ်။ အဲဒီလို အခါမျိုးကျတော့ မတရား ဖိနှိပ် ညှင်းပမ်းမှုကို ဆန့်ကျင် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့က အင်အားသုံးဖို့ လိုအပ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကလဲ ငြိမ်းချမ်း ရေးနဲ့ တရားမျှတမှုကို တိုးမြှင့်သွားစေဖို့အတွက်ကိုသာ သုံးစွဲသွားရ တာမျိုးပါ။
။ သမိုင်းပညာရှင် ဒီ လာစီ အို လီယာရီ ၏ အမြင်
အစ္စလာမ်က ဓါးမိုးပြီး သာသနာပြုခဲ့တာပဲရယ်လို့ အထင်အမြင် လွဲမှားနေမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထင်ရှား ကျော်ကြားတဲ့ သမိုင်းပညာရှင်ကြီး ဒီလာစီ အိုလီယာရီ ရေးသားတဲ့ (Islam at the Cross Road) (လမ်းခွဆုံမှ အစ္စလာမ်ဘာသာ) စာအုပ် စာမျက်နှာ - ၈ မှာ ရေးသား ထားချက်က အကောင်းဆုံး ဖြေကြားချက်ပါပဲ။
“သမိုင်းအရ အရှင်းကြီး ရှင်းနေတာကတော့ အယူသီးမွတ်စ လင်တွေက ဓါးမိုးပြီး အဓမ္မနည်းနဲ့ ကမ္ဘာတလွှားက လူတွေကို အောင် နိုင်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး ဆိုနေ ပြောနေခြင်းဟာ သမိုင်းဆရာများဘက်က ထပ်ပြန်တလဲလဲ အလွန်အကျူး ဖြစ်ကို ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိဆုံးသော ဒဏ္ဍာရီ ယုံတမ်းစကားကြီးကို ဆိုနေတာပါပဲ ဖြစ်ပါသတဲ့” ခင်ဗျား။
။ မွတ်စလင်တို့သည် စပိန်နိုင်ငံကို နှစ်ပေါင်း ၈၀ဝ တိုင် အုပ်စိုးခဲ့သည်
မွတ်စလင်တွေဟာ စပိန်နိုင်ငံကို နှစ်ပေါင်း ၈၀ဝ တိုင် အုပ်စိုး သွားခဲ့တယ်။ စပိန်က မွတ်စလင်တွေဟာ တိုင်းသူပြည်သားတွေ အစ္စလာမ် ကို ကူးပြောင်းလက်ခံလာရေးအတွက် ဘယ်တုံးကမှ ဓါးမိုးပြီး အတင်း အဓမ္မ မပြုခဲ့ကြပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ ခရူးဆိတ်ဝါဒီ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေ စပိန်ကို ဝင်ရောက်လာ့ရော မွတ်စလင်တွေကို မောင်းနှင် ထုတ်ပစ်တော့တာပါပဲ။ ဝတ်ပြုရန်ဆင့်ခေါ်တဲ့ အဇာန် ကြွေး ကြော်သံ ကိုတောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပေးမဲ့ မွတ်စလင်ဆိုလို့ တစ်ဦးတစ်ယောက် တောင်မှ မရှိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
။ ၁၄ သန်းသော အာရဗ်များသည် ကော့ပတစ် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြသည်
မွတ်စလင်များဟာ အာရေဗျအရှင်သခင်များဖြစ်ခဲ့ကြတာဟာ နှစ်ပေါင်း ၁၄၀ဝ ရှိခဲ့ပြီလေ။ အာရေဗျကို နှစ်အနည်းငယ် ဗြိတိသျှတို့က ကြီးစိုးခဲ့ပြီး ပြင်သစ်တို့ကလည်း နှစ်အနည်းငယ် အုပ်စိုးခဲ့ကြတယ်။ ခြုံပြီးပြောရရင် မွတ်စလင်တွေ အာရေဗျကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တာက နှစ်ပေါင်း ၁၄၀ဝ ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒီနေ့ထိ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ခရစ်ယာန်ဖြစ်နေသေးတဲ့ ကော့ပတစ်ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြတဲ့ အာရဗ်လူမျိုးက ဒီဒေသမှာ ၁၄ သန်း ရှိနေပါတယ်။ တကယ်လို့ မွတ်စလင်တွေကသာ ဓါးမိုးပြီး သာသနာပြုခဲ့မယ်ဆိုရင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဆိုတဲ့ အာရဗ်လူမျိုး တစ်ယောက်ကိုတောင်မှ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
။ အိန္ဒိယတွင် မွတ်စလင်မဟုတ်သူဦးရေက သန်း ၈၀ ကျော် ရှိသည်
မွတ်စလင်တွေက အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကို နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ခန့် အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ သူတို့သာဆန္ဒရှိခဲ့ရင် အိန္ဒိယမှာ ရှိတဲ့ မွတ်စလင် မဟုတ်တဲ့သူတွေကို တစ်ဦးမကျန် အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကူးပြောင်းလက်ခံ ကြရမယ်ဆိုပြီး အင်အားသုံးကာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဆို အိန္ဒိယမှာ လူပေါင်း သန်း ၈၀ ကျော်ဟာ မွတ်စလင် မဟုတ်တဲ့သူတွေပဲ။ အဲဒီမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား အားလုံးက အစ္စလာမ်ဟာ ဓါးမိုး သာသနာပြုခဲ့တာ မဟုတ်ကြောင်းကို သက်သေခံနေကြပါတယ်။
[ရ]။ အင်ဒိုနီးရှား နှင့် မလေးရှား
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာ မွတ်စလင်လူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံကြီးတစ်ခုပဲ။ မလေးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်လဲ လူများစုကြီးက မွတ်စလင် များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘယ်မွတ်စလင်စစ်တပ်ကြီးကများ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံတို့ကို ရောက်ခဲ့သတုံးဗျလို့ တစ်ဦးဦးအနေနဲ့ မေးတောင် မေးနိုင်မှာလား။ လုံးဝ ရောက်မှ မရောက်ခဲ့ဘဲ။
။ အာဖရိက အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသ
အလားတူပဲ အစ္စလာမ်ဟာ အာဖရိက အရှေ့ကမ်းရိုးတန်း ဒေသမှာပဲ အလျင်အမြန် ပြန့်ပွားသွားခဲ့ရတာပါ။ ကဲ . . . ဒီမှာလဲပဲ တစ်ဦးဦးအနေနဲ့ “အာဖရိက အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသကို ဘယ်မွတ်စလင် စစ်တပ်ကြီးကများ သွားရောက်ခဲ့ပါသလဲလို့ ထပ်ပြီး မေးမယ်ဆို မေးလို့ ရပါသေးတယ်။ ရောက်မှ မရောက်ခဲ့ဘဲ။
။ သောမတ်(စ) ကာလိုင်း(လ)
ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ သမိုင်းပညာရှင်ကြီး သောမတ်(စ) ကာလိုင်း(လ) က သူရေးတဲ့ Heroes and Hero Worship (သူရဲကောင်းများနဲ့ သူရဲကောင်း ကိုးကွယ်မှု) ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ “ဓါး ဟုတ်လား၊ ဒီဓါးကို ဘယ်ကရတာလဲ။ အမြင်သစ် အယူအဆအသစ်ကို တင်ပြတိုင်း တင်ပြတိုင်း အစပိုင်းမှာဆို လက်ခံသူက လူနည်းစုမှ လူနည်းစုပဲ။ လူတစ်ဦးရဲ့ ခေါင်းကနေပဲ တွက်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါက ထုံးစံပဲ။ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာမှ တစ်ဦး တည်းပဲ ယုံကြည်ခဲ့ရင်လဲ ဒီတစ်ခုတည်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေက ဝိုင်းပြီး ဆန့်ကျင်ကြမှာပဲ။ ဒီတော့ သူက ဓါးဆွဲပြီး ဒါကို ဖြန့်ချီဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရင်လဲ သူ့အတွက်က မဆိုစလောက် လေးသာ လုပ်နိုင်မှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ ဓါးကတော့ ထားထားရမှာပဲ။ခြုံပြီးကြည့်ရင် အချင်းအရာ တစ်ရပ်က သူ့သဘော သူဆောင် ပြီးမှသာ ပြန့်ပွားသွားရတာမျိုးပါ” တဲ့။ ဒါကတော့ အစ္စလာမ်ကို ဓါးမိုးပြီး ဖြန့် ချိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဒီအထင်မှား အမြင်မှား အချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့ဖက်က ရည်ညွှန်းပြီး ရေးသားသွားခဲ့ပါတယ်။
။ ဘာသာတရားတွင် အဓမ္မမှု မရှိစေရ
ဒါဆို အစ္စလာမ်က ဘာဓါးနဲ့ ပြန့်ပွားသွားခဲ့ရတာလဲ။ မွတ်စလင် တွေမှာ ဓါးရှိနေရင်တောင်မှ အစ္စလာမ် ပြန့်ပွားသွားအောင် ဖြန့်ချိရေးမှာ ဒါကို သုံးလို့ မရပါဘူး။ ကုရ်အာန်က အခုလို ဆိုထားလို့ပါပဲ။
“ဘာသာရေးတွင် အဓမ္မမှု မရှိစေရ။ သစ္စာအမှန်တရား သည် မိစ္ဆာအယူမှ လုံးလုံး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီး ကွဲကွဲပြားပြားကြီး ရှိနေချေသည်။”
[ အလ် ကုရ်အာန် ၂း၂၅၆ ]
။ အသိဥာဏ်ရဲ့ ဓါး
ဒီဓါး ကတော့ အသိဥာဏ်ဆိုတဲ့ ဓါးပါပဲ။ လူတွေရဲ့ နှလုံးသား တွေနဲ့ စိတ်တို့ကို အောင်နိုင်တာက အသိဥာဏ်ပဲလေ။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ် အာန် စူရာဟ် နဟလ် (စူရာဟ် ၁၆၊ ပါဒ ၁၂၅) မှာ ဆိုထားတာက ...
“အသင်တို့၏ အရှင်သခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကို အသိအလိမ္မာ ဥာဏ်ပညာနှင့် စုံမက်ဖွယ်ရာ ဟောပြောပို့ချချက်နှင့် (အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ကြကုန်။ သူတို့တတွေနှင့် အကောင်းဆုံးနှင့် အယဉ်ကျေးဆုံး အဖွယ်ရာဆုံးနည်းလမ်းများဖြင့် အခြေအတင် ဆွေးနွေးပြော ဆိုကြကုန်။”ပါတဲ့ခင်ဗျား။ [ အလ် ကုရ်အာန် ၁၆း၁၂၅ ]
။ ကမ္ဘာ့ဘာသာတရားများတွင် ၁၉၃၄ နှစ်မှ ၁၉၈၄ ခုနှစ် အထိ နှစ်ငါးဆယ်ကာလအတွင်းမှာ ယုံကြည်သူဦးရေ တိုးပွားလာမှု
ရီဒါး ဒိုင်ဂျက်(စ) မဂ္ဂဇင်းကြီးရဲ့ ၁၉၈၆ ခုနှစ်ရဲ့ လက်စွဲစာအုပ် ထဲက ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ ၁၉၃၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၄ ခုနှစ်အထိ ရာစုနှစ် ဝက်အတွင်းမှာ ကမ္ဘာ့အဓိက ဘာသာတရားကြီးများရဲ့ လူဦးရေ တိုးတက်မှု စာရင်း ဇယားကို တွက်ချက်ပြထားပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို ပလိန်းထရုသ် (The Plain Trulth) ဆိုတဲ့ မဂ္ဂဇင်းမှာလည်း ထပ်ထည့်ထားပါတယ်။ တိုးနှုန်း အမြင့်ဆုံးက အစ္စလာမ်ပဲ။ ၂၃၅ ရာခိုင်နှုန်းထိ တိုးတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားက ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းပဲ တိုးပါတယ်။ ကဲ . . . ကျွန်တော် မေးပြီ။ ဒီရာစုနှစ်ကြီးမှာ ဘယ်စစ်ပွဲကြီးတွေကို တိုက်ခဲ့လို့ လူတွေသန်းပေါင်းများစွာကို ဘာသာပြောင်းသွားစေခဲ့ရတာလဲ။
။ အမေရိကနှင့် ဥရောပတို့တွင် ကြီးထွားနှုန်း အမြန်ဆုံးသော ဘာသာတရားမှာ အစ္စလာမ် ဖြစ်သည်
ဒီကနေ့ဆို အမေရိကမှာ ကြီးထွားနှုန်း အမြန်ဆုံးသော ဘာသာ တရားကြီး ဖြစ်နေသလို ဥရောပမှာ ကြီးထွားနှုန်း အမြန်ဆုံးသော ဘာသာ တရားကလည်း အစ္စလာမ် ပါပဲ။ အနောက်တိုင်းက လူပေါင်းများစွာက အစ္စလာမ်ကို လက်ခံ လာခဲ့ကြရတာဟာ ဘယ်ဓါးနဲ့ ဘယ်အင်အား သုံးခဲ့လို့ပါလဲ။
။ ဒေါက်တာ ဂျိုးဇက် အဒမ် ပီယာဆင်
ဒေါက်တာ ဂျိုးဇက် အဒမ် ပီယာဆင် အမှန်အကန် ပြောပြ သွားခဲ့တာက "အာရဗ်တွေရဲ့ လက်ထဲမှာသာ တစ်နေ့ နျူးကလီးယား ဗုံးတွေ ရောက်သွားခဲ့ရင်ဆိုပြီး အစိုးရိမ်ကြီးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ ဒီလူတွေဟာ တမန်တော်မုဟမ္မဒ် (صلي الله عليه و سلم) သခင် ဖွားသန့်စင်တော်မူတဲ့ နေ့ကတည်းက "အစ္စလာမ်"ဆိုတဲ့ ဗုံးကြီး ကြဲချပြီးခဲ့ပြီဆိုတာကို မမြင်လိုက်ကြတဲ့သူတွေပဲ"တဲ့။